Omenala mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị na-ebu ala | Ouzhan
Mpempe akwụkwọ metal akụkụ gụnyere zọ akụkụ. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ ngwaahịa nke teknụzụ ọla na-arụ. Anyị enweghị ike ime na-ejighị akụkụ igwe rụọ ebe niile na ndụ anyị. Mpempe akwụkwọ metal akụkụ bụ site filament ike asọfe, laser ọnwụ, arọ nhazi, metal bonding, na metal ịbịaru. A na-emepụta ya site na ịbịaru, ịkụcha plasma, nkenke nkenke, mpịakọta, mpempe akwụkwọ na-ehulata, ịnwụ anwụ, ịchacha mmiri, na ịgbado ọkụ.
Omenala mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ-nkenke ọla kọpa mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ igwe
Nkọwa na akwụkwọ akụkọ ndị ọkachamara si mba ọzọ nwere ike ịkọwapụta mpempe akwụkwọ dịka: mpempe akwụkwọ bụ usoro ọrụ zuru oke oyi maka mpempe akwụkwọ (nke na-adịkarị n'okpuru 6mm), gụnyere ịkwa ajị, ịkụ ọkpọ / ịkpụ / mejuputa, mpịachi, ịgbado ọkụ, ịgbacha, na ịkpụpụta, Na-akpụ ( dị ka ụgbọ ala ahụ), wdg. Ihe ngosi ya pụtara ama bụ otu ọkpụrụkpụ nke otu akụkụ. Mpempe akwụkwọ metal ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, eletriki conductivity, ala na-eri, na ezi uka mmepụta arụmọrụ. Ha nwere otutu uzo eji eme ihe. Mpempe akwụkwọ metal nhazi e ọtụtụ-eji na ubi nke electronic, nkwukọrịta, akpakanamde ụlọ ọrụ, na ọgwụ na ahụ ike na ngwá. Dịka ọmụmaatụ, na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, na MP3, mpempe akwụkwọ bụ akụkụ dị oke mkpa. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ichepụta ngwa ọgwụ, a na-ejikwa ya n'ụgbọ ala na gwongworo (gwongworo), ụgbọ elu ụgbọ elu na nku, tebụl ọgwụ, ụlọ ụlọ (ihe owuwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Uru nke Shanghai Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ akpaaka
- Ọ nwere ike ịmata mgbanwe mgbanwe nke ọtụtụ punching igwe, na akpaka loading na ebutu na workpiece clamping na otutu ogo nke nnwere onwe nwere ike izute chọrọ nke siri ike mmepụta Filiks;
- Ọ nwere ike na-onwem na ulo oru CCD visual nnyocha na-amata free ịghọta nke mgbagwoju workpieces;
- Ọ nwere ike ịghọta na-aga n'ihu uka mmepụta nke otu workpiece, na ike na-aghọta akpaka akakabarede mmepụta nke multiple iche na obere ogbe;
- Mgbanwe dị elu, iji nweta nkwukọrịta na akụrụngwa ndị ọzọ dị ka ngwaọrụ igwe CNC, PLC, ihe mmetụta dị na mpụga, na iji nweta usoro usoro nchekwa na ntụkwasị obi site na mmemme;
- Ngosipụta: arụmọrụ dị elu, nkwekọrịta ngwaahịa, axis mpụga, palletizing na ọrụ ndị ọzọ;
- Multi-online akpaghị aka mmepụta edoghi na "dijitalụ" factory layout pụrụ n'ụzọ dị mfe ghọtara, na-azọpụta manpower ma melite oru oyiyi nke mmepụta ihe mmepụta.
Ahaziri brass mpempe akwụkwọ metal zọ igwe akụkụ
Ihe onwunwe Cold akpọrepu akwụkwọ, galvanized mpempe akwụkwọ, igwe anaghị agba nchara, dị ọcha aluminum na aluminum alloy, dị ọcha ọla kọpa na ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara elu nhazi technology
Ọgwụgwọ ihu Dabere na njirimara nke akụrụngwa na ihe ndị ahịa chọrọ, a na-eme ọgwụgwọ n'elu iji nweta ọmarịcha mmetụta na-adịgide adịgide.
Main usoro Mpempe akwụkwọ metal zọ nhazi
Ojiji Mpempe akwụkwọ metal nhazi e ọtụtụ-eji electronic ngwa, nkwukọrịta, akpakanamde ụlọ ọrụ, ọgwụ na ahụ ike na ndị ọzọ ubi, dị ka kọmputa ikpe, mobile phones, ọgwụ na ahụ ike n'ichepụta, ụgbọ ala na ụgbọala (ụgbọala) ozu, ugbo elu fuselages na nku, Medical table, ụlọ ụlọ (iwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ zọ
Osote: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ ịgbado ọkụ